omby – Midi Madagasikara
Betioky Atsimo : Mpiandry omby roalahy maty voatifitra, omby 72 lasan’ny dahalo
Redaction Midi Madagasikara 25 février 2014 Betioky Atsimo, Dahalo, Jiolahy, malaso, omby
Mbola mandravarava ny dahalo any Atsimo. Ny herinandro lasa teo iny, dia telo lahy niandry omby teny an-tsaha notafihan’ny malaso, ka maty tsy tra-drano vokatry ny tifitra variraraka ny roa. Niezaka nitsoaka ilay tovolahy fahatelo nefa azon’ireo olon-dratsy sambo-belona ka nataon’izy ireo takalonaina. Omby 72 voaroba tamin’ity fanafihana tany Betioky Atsimo ity. Niroso tamin’ny fanarahan-dia…